Carnival Sunrise named by godmother Kelly Arison at Manhattan Cruise Terminal | Cruises
Location: Mbido » Ịdee » Isesgbọ mmiri » Carnival Sunrise nke chi nne Kelly Arison kpọrọ na Manhattan Cruise Terminal
Carnival Sunrise nke chi nne Kelly Arison kpọrọ na Manhattan Cruise Terminal
N'ịgbaso ụgbọ mmiri akọrọ $200 nde nke na-ewepụtala ndị ọbịa na-akwọ ụgbọ mmiri mbụ ya na Norfolk, chi nwanyị Kelly Arison bụ nwa nwanyị Carnival Corporation & plc Onye isi oche Micky Arison na nwunye ya Madeleine - na ahaziri aha ya taa. emume mara mma na nke echefuru echefu na Manhattan Cruise Terminal na New York City.
Dị ka onye nne nke Carnival, Kelly Arison na-agbaso ọdịnala ezinụlọ - nne ya, Madeleine bụ nne nke ụgbọ mmiri mgbe ọ malitere ọrụ na 1999, na nne nne ya bụ Lin Arison jere ozi dị ka nne nne nke ụgbọ mmiri Carnival Sunrise nwanne, Carnival Sunshine, na 2013.
Kelly Arison kwuru, "Ịbụ akụkụ nke aha aha Carnival Sunrise karịrị nke m nwere ike ichetụ n'echiche na ahụmahụ m na-agaghị echefu echefu," Kelly Arison kwuru. Ụgbọ mmiri ahụ mara mma nke ukwuu, enwerekwa m nsọpụrụ ọ bụghị nanị na m ga-eme ihe nketa ezinụlọ m dị ka nne chi kamakwa iji ohere a mee ka ndị mmadụ mara maka nzukọ kwesịrị ekwesị, Ehlers-Danlos Society."
Kathie Lee Gifford, onye ya na Carnival na-enwe mmekọrịta dị ogologo afọ 35, wepụtara oge iji gwa ìgwè mmadụ ahụ okwu ma gbasaa ọchịchọ ya kacha mma nye Arison dị ka nne chi, ọrụ Gifford jere ozi maka ụgbọ mmiri Carnival abụọ, Ememe na 1987 na Ecstasy na 1991. .
Ihe omume ahụ gụnyere vidiyo na-egosi ndị egwuregwu si Miami Heat, nke Micky Arison bụ onye njikwa n'ozuzu ya. Na vidiyo ahụ, Dwyane Wade na Alonzo Mourning, yana onye bụbu onye egwuregwu Miami Heat na Carnival's Chief Fun Officer Shaquille O'Neal, kelere Arison.
“Atụmatụ maka ọrụ a malitere ihe karịrị afọ abụọ gara aga ma tinye aka na mmadụ 7,000 bụ́ ndị rụkọrọ ọrụ ọnụ iji wepụta mgbanwe a dị ịtụnanya. Obi dị anyị ụtọ ịnabata Carnival Sunrise na ụgbọ mmiri Carnival Cruise Line - ọ na-emeri ndị ọbịa anyị ma na-enye ọtụtụ ụzọ ọhụrụ ịhọrọ ntụrụndụ, "Christine Duffy, onye isi oche Carnival Cruise Line kwuru. "Ọ bụkwa ohere pụrụ iche na nke pụrụ iche inwe Madeleine Arison, onye jere ozi dị ka nne chi n'oge ebubata ụgbọ mmiri a afọ 20 gara aga, nyefere nwa ya nwanyị Kelly nsọpụrụ nke ijere nwa ya nwanyị Kelly nsọpụrụ nke ijere ozi dị ka nne chi n'oge emume nhọpụta gọọmentị anyị taa."
Dị ka akụkụ nke mmemme nkwalite ụgbọ mmiri ijeri $2 ijeri, Carnival Sunrise na-egosipụta nri, ihe ọṅụṅụ na ihe ọhụụ na-ewu ewu nke Carnival na onyinye ọhụrụ dị ka Guy's Burger Joint na Guy's Pig & Anchor Bar-B-Que Smokehouse, yana mmekorita ya na Food Network. kpakpando na onye ọlụlụ ogologo oge Guy Fieri; The Chef's Tebụl mara mma iri ihe; mmanya na-ere ọgwụ-themed Alchemy Bar; ogige mmiri mmiri WaterWorks ọhụrụ; Mpaghara ntụrụndụ SportSquare; na ndị okenye Serenity-nanị nlaghachị, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Carnival Sunrise ga-anọ n'oge okpomọkụ na New York na-arụ ọrụ njem ụbọchị anọ ruo ụbọchị 14 tupu ọ gbanwee na Fort Lauderdale, Fla., Maka oge oyi nke Caribbean na Bahamian cruises malite na October. Carnival Sunrise wee laghachi New York maka oge njem ụgbọ mmiri ọzọ na-amalite na mmiri 2020.
Caribbean Ntu Corporation Manhattan Miami Ụlọ Micky Society
Ugbu a Russia nwere nkwekọrịta njem njem na-enweghị visa na mba 12 South America niile
Ndị njem nlegharị anya nke Catalan bidoro mgbasa ozi UK iji kwalite Afọ nke Omenala Nlegharị 2019
Ntụkwasị obi na nkwado na teknụzụ: efu...
Ọrịa Ọrịa Pan-arịa nke mbụ dabere na ọbara n'oge...